IProfayili-yeNcwadi yokuPrinta iNcwadi eChina
Ulapha : Umphandle>Ngathi>Iprofayile yekhampani
BookPrintingChina yinkampani yobungcali yoshicilelo yase China ebekwe kwiPhondo lase China Guangdong. Sishicilela ngokuthe ngqo umzi-mveliso owasekwa ngo-1995 Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yophuhliso mveliso yethu ingenise izixhobo zokuprinta eziphambili, njengoomatshini be-Kodak CTP,IJamani Heidelberg bisect oomatshini bokushicilela abanemibala emine, IJapan Komori bisect oomatshini bokushicilela abanemibala emine kunye neJapan Komori bisect abashicileli abanemibala emihlanu, iyonke 11 oomatshini bokuprinta abaphambili. Umatshini wethu wokubopha ozenzekelayo weSwitzerland Martini kunye nesitishi sesali esivumela ukuba sinikeze ngeenkonzo zokuprinta ezigqwesileyo nezikhawulezayo zabathengi. Sisebenza ngokukodwa ekuprinteni uluhlu olubanzi lweencwadi, okubalwa, Iincwadi ezinoqweqwe oluqinileyo, iincwadi ezinoqweqwe oluthambileyo,Iincwadi ezinemibala,Iincwadi zabantwana,iincwadi zokupheka,iincwadi coffee itheyibhile, Iincwadi zebhodi,incwadi yokubhalela,Iincwadi zeefoto,ikhathalogu,brochure&incwadana,iphephancwadi, ikhalenda, amaphetshana,iifolda,nokunye okuninzi.
Sinikezele nge-ISO9001:2008， Umgangatho we-FSC woQinisekiso lwesitifiketi sokugcinwa kwamalungelo okuhlangabezana nomgangatho olungele i-eco. Ngoku iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe amaninzi ehlabathi njenge-USA, Ostreliya, Khanada,UK, Fransi,ISwitzerland,Jemani, Swiden, Speyin, UmAfrika, njl kunye nodumo oluphezulu.
Iqela lethu lokuthengisa lisencinci kwaye linamandla, Siza kuqinisekisa ukuba unokufumana isicatshulwa sencwadi esikhawulezileyo nge-1-2hours ngezona zisombululo zethu zichanekileyo nezinyanisekileyo ngaphandle kweendleko ezifihlakeleyo. Inkonzo yeyona nkampani iluncedo kakhulu phakathi kwezinye iinkampani zokushicilela iincwadi zaseTshayina. Uyakonwabela ukwenza ishishini nathi.
Ukuhanjiswa kukwisebe lethu elilawula kakhulu. Xa iimveliso zakho ziphuma, Siza kusebenzisa iibhokisi ezomeleleyo kunye nepallet ukuyipakisha. Unokukhetha inqanawa ngenqwelomoya okanye ulwandle ngokuthanda kwakho. Indleko zethu zokuhambisa ziya kusindisa kakhulu nawe. Ngokukhuselekileyo, Gcina, Ngexesha lokuya kwakho.
Ukuprintwa kweencwadi eChina kuye kwaqhubela phambili oomatshini bokushicilela iincwadi,Umgangatho ophezulu wezinto ezisephepheni, ngokukhawuleza&iqela lokuthengisa, ukuhanjiswa kwenkonzo okukhawulezayo nokuzinzileyo, Ixabiso elifanelekileyo lokushicilela. Amava ethu atyebileyo ekuthumeleni kwelinye ilizwe ahlangabezana neemfuno zakho zokushicilelwa kweencwadi ngokwesiko. Injongo yethu kukugcina ishishini ixesha elide kunye nabo bonke abathengi. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo yoshicilelo, ungathandabuzi ukunxibelelana nathi nge-imeyile apha sales@bookprintingchina.com, siza kukunika locaphulo ngoko nangoko kwi 1-2hours. Masiqale incwadi yakho ngoku!